Kim Gura x Park Sunyoung x Kwanghee MBC ဖျော်ဖြေ‌ရေးပရိုဂရမ်သစ် 'My Working Vlog' - 빵야뉴스
승인 2021.01.27 20:11
[BBANGYA News | Reporter Khaing] MBC ၏ 'My Working Vlog!' သည်ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီက pilot entertainmentတစ်ခုအနေဖြင့် အာရုံစိုက်မှုအများဆုံးရရှိခဲ့သည့် MBC ၏ ပုံမှန်ပရိုဂရမ်အဖြစ် မတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် ပထမဆုံးထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်သည်။
'My Working Vlog' သည် 'employee Vlog' ပုံစံဖြင့် အမျိုးမျိုးသော ဝမ်းစာရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းဖြင့် ယနေ့ခေတ်လူတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေကို လေ့လာသည့် အခြားသူများ၏ 'Workplace' ကို ချောင်းကြည့်သည့် အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
pilot ထုတ်လွှင့်ချိန်တွင် ပဉ္စမအဆင့် ပြည်သူ့၀န်ထမ်း Lee Gyu-bin အပါအ၀င် ပါဝင်သောအဖွဲ့ဝင်များ၏ ဘဝများသည် ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်၀င်စားမှုနှင့် စာနာမှုကို နှိုးဆွပေးခဲ့ပြီး အားပေးမှုရရှိခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ၎င်းသည် portal site အမျိုးမျိုးတွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရှာဖွေမှုရှိခဲ့ပြီး တချိန်တည်းမှာပင် အမြင့်ဆုံးပရိသတ်အဆင့်၏ ၆.၂% အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီး ဖျော်ဖြေရေးတွင် နံပါတ် ၁ အဖြစ် ထင်ရှားခဲ့သည်။
ဤအကြောင်းကြောင့် အင်္ဂါနေ့တိုင်းတွင် အောင်မြင်စွာ ထုတ်လွှင့်သော'My Working Vlog' သည် နောက်ခံအမျိုးမျိုးမှ ရုံးဝန်ထမ်းများ အလုပ်သွားပြီးနောက် ပေါ်ပေါက်လာသော နေ့စဉ်ဘဝ၏ ချိုမြိန်သော၊ ခါးသော၊ ငန်သော ရသများကို ပြသရန် စီစဉ်ထားသည်။ 'My Working Vlog!' ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်မှုအတွက် စတင်လုပ်ဆောင်သော IT developer များ၊ CEOများနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များစသည့် ပင်ကိုစရိုက်ကို ထင်ဟပ်စေသော ၀င်ငွေရရှိမှု မှတ်တမ်းရှိသည်။
MC များအနေဖြင့် ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းဒါရိုက်တာအဆင့်ရှိ‌‌‌သော Kim Gura နှင့် သတင်းကြေငြာသူ Park Sun-young တို့နှင့် ယနေ့ခေတ် ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်း၏ ကိုယ်စားပြုအဖြစ် Kwang-hee တို့ ပါဝင်မည်။
ကြည့်ရှုသူများ၏ လူကြိုက်များမှုကြောင့် ပုံစံအသစ်တစ်ခုကို မွေးဖွားကြောင်း ကြေငြာခဲ့သော'My Working Vlog' သည် MBC ၏ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဖျော်ဖြေရေးတွင် အင်အားကြီးမားလာလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ ပထမဆုံးထုတ်လွှင့်မှုကို မတ်လ ၂ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ ညနေ ၉နာရီ ၂၀မိနစ်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။